हिमाल खबरपत्रिका | अन्नको अनादर!
विदेशतिर ठूला होटलहरूमा उब्रिएका खाना 'फूड ब्यांक' मार्फत भोका पेटहरूमा पुग्छ, काठमाडौंका तारे होटलका खाना भने बंगुर फार्ममा पठाइन्छ।
कति खान सकिन्छ भन्ने स्वयम् खान बस्नेले पनि ठ्याक्क भन्न सक्दैन। खासै मन नभए पनि कहिलेकाहीं बसेपछि मनग्ये खाइन्छ। कहिले चाहिं भोक लागेको भए पनि खासै रुच्दैन। अझ्, पकाउनेले त अर्काको पेटको अनुमान लगाएर पकाउनुपर्ने भएकोले कोही बेला उब्री–पाब्री हुन्छ भने कहिले पुग्दैन। दिनहुँ भोजभतेर हुने राजधानीका तारे होटलहरूमा भने परिकारहरू सधैं उब्रिरहेका हुन्छन्। के गरिन्छ त बढी भएको खाना? “भाँडामै उब्रिएको चोखो खाना स्टाफ–किचेनमा पठाउँछौं”, सांग्रिला होटलका मानवस्रोत व्यवस्थापक खगेश्वर अधिकारी भन्छन्, “स्टाफहरूले खाएर उब्रिएका खाना भने फोहोरको कन्टेनरमा जान्छ।”
हायात रिजेन्सी, र्‍याडिसन, सोल्टी क्राउन प्लाजा, याक एन्ड यती, अन्नपूर्ण लगायतका होटलहरूले पनि यसै गर्छन्। हायातका जनसम्पर्क अधिकृत अनलकुमार प्रधानले बिहानको बेकरी आइटम (पाउरोटी, केक, बिस्कुट आदि) भने उब्रिएको बेला जोरपाटीको 'बुद्धिस्ट चाइल्ड होम' मा पठाउने गरेको बताए।
तारे होटलहरूमा दैनिक तयार गरेको मध्ये तीन/चार प्रतिशत परिकार उब्रिन्छन्। पार्टी भएका बेला बफेट लगाउँदा त्योभन्दा बढी उब्रिन्छ। त्यस्तो बेला प्लेटमा फालिएको र भाँडामै बचेको खाना जोड्ने हो भने गाडी नै भरिने गरी उब्रिएको हुन्छ। राजधानीका ठूला रेस्टुरेन्ट, क्याफे, पार्टी प्यालेस र चमेनागृहहरूमा पनि उब्रिएको खाना स्टाफलाई दिइन्छ। स्टाफहरूले पनि खाइनसकेपछि कन्टेनरमा फालिने सामाखुसीको एबी पार्टी प्यालेसका निर्देशक अर्जुनप्रसाद पन्त बताउँछन्। राजधानीका रेस्टुरेन्ट, क्याफे, पार्टी प्यालेस, चमेनागृह तारे होटलहरूमा उब्रिएको खाना खासमा बंगुर फार्महरूले लैजान्छन्। अन्नपूर्ण होटलका एक कर्मचारीले टेकूमा आफैंले बंगुर फार्म खोलेका छन् भने हायातले ठेक्कामा लगाएको छ। सांग्रिला होटलले आफ्नै बगैंचामा कुहाएर कम्पोस्ट मल बनाउँछ।
अमेरिकाको शिकागोमा रहेको 'ग्लोबल फूड ब्यांक नेटवर्क' ले उब्रिएका खाना संकलन गरेर शहरका भोका पेटहरूमा पुर्‍याउन भारत, चीन, सिंगापुर, अस्टे्रलिया लगायत विश्वका ३८ देशमा शाखा खोलेको छ। नेपालमा भने यस्ता संघ–संस्था नभएकोले अब आफैं यो काम थाल्न लागेको ललितपुरको कुपन्डोलस्थित महिला वातावरण संरक्षण समिति (वेप्को) की अध्यक्ष विष्णु थकालीले बताइन्।
वेप्कोले फोहोरमा फालिएका अन्य सरसामग्री बटुलेर कम्पोस्ट मल, ब्याग, टोकरी, फोटो–फ्रेम आदि बनाउँदै आएको छ। संस्थाको 'ग्रीन सर्कल प्रोजेक्ट' मा हायात रिजेन्सी, हिमालय, र्‍याडिसन र याक एन्ड यती होटल पनि सदस्य छन्।
राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार, संसारमा साढे ८० करोड मानिस पेटभर खान नपाएर कुपोषणको शिकार बनेका छन्। नेपालमा पनि कुपोषण पीडितको संख्या बढिरहेको छ। यो अवस्थामा तारे होटलहरूको खाना महानगरपालिकाको कन्टेनर र बंगुर फार्महरूमा पुगिरहेको छ। पिकनिक वा घरमै आयोजना गरिने भोजभतेरमा उब्रिएका परिकारहरू पनि फाल्ने गरिएको छ। 'अन्नले सराप्छ' भन्ने नेपाली भनाइ सम्झ्ँदै व्यवस्थापन गर्ने हो भने यी खानाले धेरैको पेट भरिनेछ।